China Eco-friendly dégradable iridescent TPU cosmetic bag factory sy mpamatsy | Changlin
Kitapo makiazy TPU tsy azo ovaina amin'ny tontolo iainana
Holographic TPU material dia sosona ivelany roa an'ny TPU mazava ary iray ao anaty sarimihetsika PET miloko. Izany sosona telo izany dia mifamatotra ary miova ho TPU holographic TPU miloko sy semi-mangarahara.
Material: TPU Holographic Weight: 91g
Size: 18L * 6.5W * 17Hcm fanakatonana: Zipper
Toerana niandohana: Guangdong, CN Port: Shenzhen, HK, Guangzhou
fampiharana: Kitapo kosmetika, kitapo fandroana, poketra, kitapo fonosana
Mahatsara azy: Biodegradable, tantera-drano, tsara tarehy
Amin'ny ankapobeny, manana TPU holographic "manga" sy TPU holographic "mavokely" izahay satria manana loko roa amin'ny sarimihetsika PET. Fa raha misy sosona ivelany an'ny TPU mazava dia miova ho tint TPU fitaovana. Azontsika atao ny manao loko holographic TPU mitovy loko amin'ny sosona ivelany an'ny TPU tint. Afaka manana TPU holografika maitso, TPU holografika mainty ……
Ny sarimihetsika TPU ampiasainay ho an'ny kitapo dia fitaovana TPU 100% ary mety ho simba izany. Ahoana no fisehony? Ny fitaovana TPU dia ho zavona na hivadika loko volontsôkôlà tokony ho 6 volana aorian'ny famokarana. Ireo fisehoan-javatra ireo dia manondro fa omena oksizenina sy lo izy. Ary ny TPU dia ho lo ao anatin'ny herintaona na roa aorian'ny fandevenana azy amin'ny tany.
Loko manintona, endrika tsara tarehy
Vita ny antsipiriany tsara
Previous: Holographic TPU Handbags Eco-friendly biodegradable
Manaraka: TPU Cosmetic Bags Eco-friendly Degradable Iridescent
Holographic TPU Handbags Eco-friendly biodegrad ...
TPU Cosmetic Bags Eco-friendly Mandrakizay Iride ...
Manaova kitapo Eco-friendly Clear TPU Holographic ...
Kitapo lamba rongony haingon-trano ...